Zimbi kangakanani izindawo ze-DO ezeqa inani labo lezivakashi? | Martech Zone
Zimbi kangakanani izindawo ze-DO ezeqa inani labo lezivakashi?
NgoLwesine, Juni 7, 2007 NgoMgqibelo, Januwari 6, 2018 Douglas Karr
IComScore isanda kukhipha i- Iphepha Elimhlophe ekususweni kwamakhukhi. Amakhukhi amafayili amancane afinyelela kumakhasi e-web ukuze alondoloze imininingwane kuwo ukumaketha, ukuhlaziywa, analytics, nokusiza ngolwazi lomsebenzisi. Isibonelo, lapho uthikha ibhokisi ukuze ulondoloze imininingwane yakho yokungena ngemvume kusayithi, ngokuvamile igcinwa ku-Cookie futhi ifinyelelwe ngesikhathi esizayo lapho uvula lelo khasi.
Siyini isivakashi esihlukile?
Ngezinhloso zokuhlaziya, njalo lapho ikhasi lewebhu lisetha ikhukhi, limakwa njengesivakashi esisha. Uma ubuya, bayabona ukuthi ubusuvele ukhona. Kunamaphutha ambalwa ahlukile ngale ndlela:
Abasebenzisi basusa amakhukhi… okuningi kakhulu kunendlela ocabanga ngayo.
Umsebenzisi ofanayo ufinyelela iwebhusayithi kusuka kumakhompyutha amaningi noma iziphequluli.
Izingosi zezindaba zesifunda ziyakwazi ukukhokhisa abakhangisi ngokususelwa kulwazi olufana nalolu. Eqinisweni, iphephandaba lasendaweni i-Indianapolis Newspaper lithi,
I-IndyStar.com ingumthombo we-inthanethi ophakathi nendawo wase-Indiana wezindaba nolwazi, ethola ukubukwa kwamakhasi angaphezu kwezigidi ezingama-1, Izivakashi eziyizigidi ezingama-2.4 kanye nokuvakashelwa okuyizigidi ezingama-4.7 ngenyanga.
Ngakho-ke zingakanani izinombolo zokususa amakhukhi?
Imiphumela yocwaningo iveze ukuthi cishe amaphesenti angama-31 wabasebenzisi bekhompiyutha base-US basula amakhukhi abo eqembu lokuqala ngenyanga (noma bawasuse ngesoftware ezenzakalelayo), ngokwesilinganiso amakhukhi ahlukene angama-4.7 agcinwa kusayithi elifanayo kule ngxenye yomsebenzisi. . Izifundo zangaphambilini ezizimele ezenziwa yiBelden Associates ngo-2004, yiJupiterResearch ngo-2005 kanye neNielsen / NetRatings ngo-2005 nazo zaphetha ngokuthi amakhukhi asuswa okungenani amaphesenti angama-30 wabasebenzisi be-Intanethi ngenyanga.
Kusetshenziswa isampula yasekhaya ye-comScore yase-US njengesisekelo, isilinganiso samakhukhi ahlukile ayi-2.5 abonwa kukhompyutha ngayinye ye-Yahoo! Lokhu kutholakala kukhombisa ukuthi, ngenxa yokususwa kwekhukhi, uhlelo lokulinganisa i-server-centric elisebenzisa amakhukhi ukukala usayizi wesisekelo sezivakashi zesayithi lizohlala likweqa inani leqiniso lezivakashi eziyingqayizivele kuze kufike ku-2.5x, okungukuthi ukweqisa okufika emaphesentini ayi-150. Ngokufanayo, ucwaningo luthole ukuthi uhlelo lweseva yesikhangiso olusebenzisa amakhukhi ukulandelela ukufinyelela nokuvama komkhankaso wesikhangiso esikwi-inthanethi luzokweqa ukufinyelela ngokufika ku-2.6x futhi kudlulise imvamisa ngezinga elifanayo. Ubukhulu bangempela bokweqisa kuxhomeke ebangeni lokuvakashelwa kwesiza noma ukuvezwa komkhankaso.
Ngabe abakhangisi bayasizakala?
Kungenzeka! Thatha isiza esifana nesayithi lezindaba lasendaweni nokuthi leyo nombolo eyizigidi ezingama-2.4 yehlela ngokushesha izivakashi ezingaphansi kwesigidi. Isayithi lezindaba yisiza esivame ukuvakashelwa futhi, ukuze leyo nombolo ibe ngaphansi kwalapho. Manje engeza inani labafundi abavakashela isayithi ekhaya nasemsebenzini futhi ushiya leyo nombolo elinye inani elibalulekile.
Lokhu kuyinkinga esixukwini esidala 'sezinhlamvu zamehlo'. Ngenkathi abantu abathengisayo behlala bethengisa ngezinombolo, amawebhusayithi abo angaba nezivakashi ezimbalwa kakhulu kunemidiya encintisanayo. Vele, ayikho indlela yangempela 'yokulungisa' inkinga. Yize noma yimuphi uchwepheshe wewebhu onengxenye yobuchopho eqonda ukuthi kunjalo, angizami ukusho ukuthi lawo masayithi aqamba izinombolo zawo ngenhloso. Abaziqedi izibalo zabo ngamabomu ... bamane babika izibalo ezijwayelekile zomkhakha. Izibalo ezenzeka zingathembeki kakhulu.
Njenganoma yiluphi uhlelo oluhle lokumaketha, gxila kwimiphumela hhayi kunani lama-eyeballs! Uma u kukhona ngokuqhathanisa amazinga phakathi kwezinhlobo zemidiya, ungahle uthande ukusebenzisa izibalo ezithile ezisheshayo ukuze izinombolo zibe ngokoqobo kancane!
Tags: izinombolo zesikhangisoukukhangisaizibalo zokukhangisaisipikiliukususwa kwekhukhiinani lezivakashi
I-Google Adwords, i-Adsense neGoogle Maps?
UJun 8, 2007 ngo-1: 48 AM
Mhlawumbe ngokuzayo okuthile emigqeni yeCardSpace kuzokhanyisa le nkinga. Noma, kungaba yiBig Brother kakhulu. Kuzofanele silinde sibone.
UJun 8, 2007 ngo-8: 32 AM
ukushilo, ayikho indlela enembile yokunquma izivakashi ezihlukile kuwebhusayithi.
amakhukhi awethembekile futhi manje abantu abaningi basebenzisa i-flash kwisitoreji eseceleni seklayenti.
Kepha kubakhangisi, ukubuka ikhasi yikho konke okubalulekile. Kulula ukunquma ngokunembile izinombolo zezikhathi lapho isikhangiso siboniswa khona
Futhi-ke, izinsizakalo eziningi zezibalo zewebhu zinenkinga yazo. Isayithi lezibalo ezibukhoma njenge-statcounter lizocubungula inani elilinganiselwe labasebenzisi ngasikhathi.
Izibalo zeGoogle zingcono kakhulu kulokhu, kepha kwesinye isikhathi kufanele ngilinde izinsuku ezi-2 ukuthola umbiko wakamuva 🙁
Jun 9, 2007 ku-4: 00 PM
“Kubhekwe isilinganiso samakhukhi ayi-2.5 kwikhompyutha ngayinye ye-Yahoo!”
Bangaki abasebenzisi be-Yahoo abakhona kwikhompyutha ngayinye yasekhaya? Yebo, cishe cishe u-2 noma u-3. Ngiyazi ukuthi ngihlala ngivala umkami ukuze ngibheke i-akhawunti yami, noma ngabe ikuYahoo noma iGoogle, iSchwab noma enye indawo.
Endlini yethu, kwenzeka ukuthi sibe nama-PC ama-4 ne-Mac online phakathi kwabantu abadala ababili, ngakho-ke kwenzeka ukuthi unekhompyutha eyodwa noma amaningi.
Uma unesayithi le-reg futhi izingodo zakho zeseva ziyasebenza, yenza umbiko wamagama wamakheli we-IP ngamunye. (lokhu kukhombisa ukuthi bangaki abantu ababelana ngamakhompyutha / abanama-dup account). Ngemuva kwalokho yenza umbiko okhombisa ukuthi mangaki ama-IPs igama ngalinye avele kuwo. (lokhu kukhombisa ukuthi a) ips ivuselelwa kabusha ngama-isps no-b) abasebenzisi bangena ngemvume besuka ezindaweni ze-mulitiple. )
Ngakho-ke, inombolo engu-2.5 icishe ilungile. Hhayi ukukhwabanisa, hhayi ukweqisa, kahle nje. Ayikho indaba lapha. Hambisa phambili manje.
Jun 9, 2007 ku-4: 25 PM
I-athikili ebhaliwe ayixoxi ngezinkinga zokungena / ukungena ngemvume maqondana namakhukhi, ikhuluma ngekhukhi ukususa nomthelela wayo ekubukekeni kwamakhasi okuhlukile. Yahoo! ayisusi amakhukhi lapho uphuma futhi ungena ngemvume.
Okusematheni ukuthi imindeni engaphezu kwama-30% ISUSA amakhukhi ayo, ngakho-ke ubonwa njengesivakashi esisha… hhayi esinye ekhaya. Sicela ufunde le ndatshana ukuze uthole incazelo ejulile.
Isibonelo sakho futhi yilokho engikusho kokuthunyelwe kwami, ukuthi abantu abaningi bavakashela isiza esifanayo kusuka kumishini eminingi. Ngama-PC ama-4 neMac phakathi kwabantu abadala abangu-2, uma uvakashela isiza esifanayo kuyo yonke imishini, ungabonakala kufinyelela ezi-5 'zezivakashi ezihlukile', hhayi u-2.5! Futhi uma uhlala ususa amakhukhi njengoba kwenza ama-30% + wabantu, lokho kuguquka kube ngaphezu kwezivakashi eziyi-12.5 ezihlukile.
Njengoba ngishilo, angikholwa ukuthi kungumgunyathi… kepha kweqisiwe. Umndeni wakho uyakufakazela lokho.
Jun 9, 2007 ku-11: 22 PM
Kufundwa kabusha i-athikili nempendulo yakho futhi…uqinisile. Ekuqaleni angikuqondanga iphuzu lakho. Siyabonga ngokucacisa.
Lokho kushiwo, i-gautam ilungile – abantu abaningi ngokwengeziwe basebenzisa ama-flash cookies, noma bengenaso esinye isizathu sokusebenzisa i-flash. Imfihlo encane engcolile: awukwazi (kalula) ukususa amakhukhi asethwe ku-flash yakho.
(Ama-Google awasebenzisi i-flash eningi. I-DoubleClick iyenza…)
Uma amasayithi efuna ukuhlanzeka kubakhangisi, badinga ukubekwa obala kakhudlwana kokuthi into leyo yabukwa kangaki ngubani futhi nini.
Njengoba amafayela we-log awekho kahle kulokho, azodinga idatha eningi ku-database. I-database enkulu kakhulu.
Njengoba lokho kungeke kwenzeke kungekudala, umqondo omuhle, njengoba usho, ukugxila kwimiphumela!